ဖြောင့်ဖြောင့်. တိတ်တခိုး. ဖန်စီ.
သင်၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုကမ္ဘာသို့ယူဆောင်လာရန်အချိန်တန်ပါပြီ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်သင့်အားအခမဲ့အခမဲ့စကူညီနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
& eCommerce စတိုးဆိုင်သည်အခြားသုံးစွဲသူများသိုမဟုတ်
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများသည်မည်သည့်အကြံဥာဏ်များ၊ မည်သည့်ခေတ်မီ browser မဆို၏တူညီသောစမ်းသပ်မှုများအတွက်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ဖြေရှင်းချက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
Drag-n-drop သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလျင်မြန်စွာဖန်တီးရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ဒီဇိုင်းနှင့် coding ကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါ
၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုင်းနှင့်စတိုးဆိုင်တိုင်းတွင်အမြန် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် QR ကုဒ်တစ်ခုစီရှိသည်
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဘေးတွင်သင်ဖန်တီးထားသောနှင့်ပိုင်ဆိုင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့မှခရက်ဒစ်မသိမ်းထားပါ
အခမဲ့အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရန် ၁ မိနစ်သာလိုသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုအပ်ပါ၊ လျှို့ဝှက်ကြေးလည်းမရှိပါ
သင်၏စီးပွားရေး / ကုမ္ပဏီသတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်များကိုထည့်သွင်းထားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာများဖွဲ့စည်းပုံတွင်သာဖြည့်စွက်ပါ
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒိုမိန်းခွဲမှတဆင့်ဝဗ်ဆိုက်များကိုလက်ခံရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် FTP မှတဆင့်သင်၏လက်ရှိ hosting server သို့တင်ပါ
သင်၏အကောင်းဆုံးအခမဲ့စတိုးဆိုင်ကိုဖွင့ ်၍ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုစတင်ရောင်းချပါ
ပထမဆုံး Website ကိုစတင်ပါ
သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို eCommerce စတိုးတည်ဆောက်သူနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းအားတင်ပြကြပါစို့။ ငါတို့သည်သင်တို့အကန့်အသတ်မရှိထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့, Unlimited စတိုးဆိုင်များကိုဖန်တီးကူညီပေးသည်; ငွေပေးငွေယူခမရှိ၊ ငှားရမ်းခမပါ၊ သင်ရောင်းသည့်အတွက် 100% ပေးချေမှုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
အပေါ်ကလိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်ပါသလား။ သင်၏စီးပွားရေးဆိုက်များနှင့်စတိုးဆိုင်များကိုသင်လိုချင်သည့်အတိုင်းအတိအကျဖန်တီးရန်၊ ဒီဇိုင်းဆွဲရန်၊ စီမံရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည့်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏အစီအစဉ်ကို ဦး စွာရွေးချယ်ပါ လစဉ်ကာလများအတွက်စျေးနှုန်းများ, နောက်မှသင်၏အစီအစဉ်ကိုအဆင့်မြှင့်လိမ့်မည်
သင်ပထမ ဦး ဆုံးလကိုအခမဲ့ကြိုးစားရန်ခရက်ဒစ်ကဒ်မလိုအပ်ပါ
1 ဆိုဒ် သာ
1 စတိုးဆိုင် သာ